घट्दैछ सीमा वारपार विवाह – Sadarline
२६ बैशाख २०७४, मंगलवार १३:२५
कृष्ण अधिकारी/नेपालगन्ज र सुरेन्द्रकुमार कामती/सिरहा, खोज पत्रकारिता केन्द्र,
एकैखाले सामाजिक परिवेश र संस्कृतिका कारण वर्षौंदेखि नेपाल र दक्षिणी छिमेकी भारतको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीच बिहेवारी चल्दै आएको छ । तर, माओवादी द्वन्द्वसँगै कमी आएको यो ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्ध यतिखेर झन् घट्दो क्रममा छ, किन ?
नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने खासगरी मधेशी समुदायका छोराछोरीको बिहेवारी सीमावर्ती भारत तथा भारतीयको विवाह नेपालतर्फ हुँदै आएको छ । एकै खाले सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशका कारण सीमा वारपार हुने बिहेवारीलगायतका यस्ता सम्बन्धका कारण नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीच ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्ध रहँदै आएको छ भनिन्छ । “पहिला त यो सीमा हो । यो भूमि नेपाल हो र यो भारत हो भन्ने पनि थिएन” करीब साढे तीन दशकअघि नेपाली युवासँग विवाह गरेर आएकी अधिकारकर्मी तथा पूर्वसभासद् मोहमदी सिद्दिकी भन्छिन्, “एक–अर्को देशमा विवाह भएको अनुभूति पनि हुन्थेन । अहिले पनि औसतमा दैनिक दुई–तीन वटा बाराती (जन्ती) सीमा वारपार गरिरहेकै देखिन्छ ।”
पूर्वी मधेश सिरहा नगरपालिका–१६ माडरका धर्मेन्द्रकुमार झाले पनि गएको वर्ष भारत मुजफ्फरपुर जिल्लाको जमालपुर कुदेकी रितुलाई जीवनसाथीका रूपमा भित्र्याए । विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा गरेकी रितु झा भन्छिन्, “नातागोताकै सम्पर्कका आधारमा हाम्रो विवाह भयो ।” हिन्दीमा पढाइ गरे पनि मैथिली भाषामा आफूलाई कुनै कठिनाइ नहुने उनको भनाइ छ । नागरिकताका लागि आवेदन दिएकी रितु अवसर पाए सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहन्छिन् ।
तथ्यांकले के देखाउँछ भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेमा अधिकांश नेपालीसँग विवाह गरी आएका भारतीय महिला छन् र यस किसिमको विवाह तराई–मधेशका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा बढी हुने गरेको छ । हालसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएकाको संख्या आधार मान्ने हो भने पर्सा, सर्लाही, धनुषा, बारा र रूपन्देहीमा सीमापारिबाट विवाह गर्ने प्रचलन बढी छ । (हे., सबैभन्दा धेरै अंगीकृत नागरिकता वितरण भएका १० जिल्लाको विवरण चार्टमा ।)
सिरहास्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसका मैथिली विषयका प्राध्यापक उमेशकुमार झा ‘ललन’ का अनुसार पहिले मिथिलाञ्चलको सीमा उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा गंगासम्म र पश्चिममा गण्डकदेखि पूर्वमा महानन्दासम्म थियो । सन् १८१६ मा मिथिलाञ्चल विभाजित भयो र सन् १९३१ देखि सीमाको रेखांकन गरिएको हो । मिथिला विभाजन हुँदा शीर्ष भाग नेपालमा र बाँकी पारि (भारत) परे पनि यो क्षेत्र एउटै भूखण्डको रहेको प्राध्यापक झाको तर्क छ । “त्यसैले यस क्षेत्रका समुदायबीच अझै पनि प्रगाढ सम्बन्ध र सद्भाव छ । एकलाई दुःख प¥यो भने अर्कोले मलहम लगाउन आइपुग्छन्”, प्राध्यापक झा भन्छन् ।
विज्ञहरूका भनाइमा, संस्कृति र समाजले साथ दिंदादिंदै पनि सीमा वारपार विवाह घट्नुमा केही महत्वपूर्ण कारण छन् । नेपाल र भारत दुवैतर्फ हिजो जस्तो सहज आवागमनको अवस्था अब रहेन । मधेशी समाजको अघिल्लो पुस्तालाई राम्रोसँग थाहा छ हिजो सीमा वारपारमा अहिले जस्तो बन्देज थिएन । सहजै जन्ती आउजाउ हुन्थ्यो । दाइजो दिए–लिएको मालसामान सजिलै वारपार गर्न सकिन्थ्यो । अहिले जस्तो एसएसबी र सशस्त्र प्रहरी थिएनन् । अहिले एक देशबाट अर्को देशमा जन्ती जानु–आउनु असजिलो मामिला हुन थालेको छ ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रका भनाइमा, “अघिल्लो पुस्तासम्म नेपाली समाजको रहनसहन स्तर छिमेकी भारतीय समाजको भन्दा उच्च मानिन्थ्यो । सीमित आय भए पनि छिमेकी नेपाली समाजको जीवनस्तर लोभलाग्दो थियो । अब छिमेकी भारतीय समाजमा छिटोछिटो मध्यम वर्गको उदय भइरहेको छ । जसको प्राथमिकता अब नेपाली समाज रहेन । हिजो मधेशी समाजमा सरकारी जागीर एउटा आकर्षणको विषय थियो । सुरक्षा राम्रो थियो । छिमेकी भारतीय समाजमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा दाइजो न्यून थियो । ती परिवेशहरूमा अहिले थुप्रै परिवर्तन आइसकेको छ ।”
मिश्र भन्छन्, “शिक्षा, चेतना र राज्यमा पहुँचको हिसाबले पनि मधेशी समाज अहिले फैलिंदो क्रममा छ । हिजो सीमित मात्राको उत्तर–दक्षिणमा हुने विवाहलगायतका सम्बन्धहरू अहिले पूर्व–पश्चिमसम्म फैलने क्रममा छन् । वयलगाडाले निर्धारण गर्ने दूरीमा कायम हुने सम्बन्धहरू यातायातका साधनले फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । यतिसम्म कि २०६४ सालसम्म आइपुग्दा राजधानी उपत्यकामा पनि मधेशी समुदायको उपस्थिति ह्वात्तै बढेको छ । समाज फैलने÷विस्तार हुने क्रमले विवाहलगायतका सम्बन्धहरूमा पनि पर्याप्त विकल्प जन्मिन थाले ।”
नेपालको तुलनामा भारतमा दाइजो र यससँग गाँसिएको हिंसा पनि मधेशी चेलीहरूले भारतमा विवाह गर्न इच्छा नदेखाउने एउटा कारण हो । त्यस्तै अर्को कारण त्यहाँको अनुदार नागरिकता नीति पनि हो । “विवाह गरेको सात वर्ष पछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य हुने” शर्त यस बीचमा न्याय पाउन प्रमाण जुटाउनमा हुने कठिनाइ जस्ता कारणले पनि आफ्नो भविष्य आकलन गर्न सक्ने नेपाली चेली भारतीयसँग विवाह गर्न अनिच्छुक देखिनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चर्कंदै गएपछि सीमा पारिबाट नेपालतर्फ विवाह गरिदिने प्रचलनमा देख्न सकिने गरी कमी आएको हो । त्यसबाहेक सीमा वारपारको बदलिंदो आर्थिक विकास, सीमाका नियमहरूले पनि त्यसमा असर पु¥याएको छ । भारतीय ज्वाइँहरू ससुराली आउँदा आफ्नै गाडी चढेर नेपालका गाउँगाउँसम्म पुग्न सक्छन्, भन्सारमा शुल्क तिरेपछि भारतीय गाडीले सजिलै नेपालमा प्रवेश पाउँछन् । तर नेपाली ज्वाइँहरू आफ्नै गाडी भए पनि त्यो लिएर ससुराली भारत जान सक्दैनन् । नेपाली नम्बरका गाडीहरू भारत प्रवेशका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासबाट अनुमति लिनुपर्छ । नेपाली नम्बरका गाडी लिएर जन्ती जान पनि दूतावासकै अनुमति चाहिन्छ ।
सीमावर्ती भारतको पथरगाढामा रहेको गिरबल उच्च बिद्यालयका संस्थापक जगन्नाथ यादवले नेपालमा चर्केको माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण सीमा वारपार विवाहमा कमी आएको बताए । भारतीय पत्रकार इन्द्रमोहन मिश्रकी बहिनी राजलक्ष्मीको सीमावर्ती नेपाली गाउँ देउरीपट्टीमा विवाह भएको छ । “तर विश्वमै शान्त मानिने नेपालको राजनीतिक उथलपुथलले सीमा वारपारको वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एक प्रकारको तनाव निम्त्याएको छ”, मिश्रले भने । नेपालबाट पनि भारततर्फ छोरी–चेलीको विवाह गरिदिने क्रममा कमी आएको शिक्षक अरुण पासवानको बुझाइ छ । भारतीय गाउँबाट विवाह गरेका उनी छोरीको विवाह भने नेपालमै गर्ने बताउँछन् । ब्रजमोहन जनता माध्यमिक विद्यालय माडरका शिक्षक सोमा गुप्ता, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने छात्राहरूले भारतमा भन्दा नेपालमै विवाह गर्न चाहेको बताउँछन् । गुप्ता भन्छन्, “नेपालीपनको बोध, बदलिंदो जीवनशैलीको कारण पनि अहिले यताका केटीहरू उता विवाह गर्न हिच्किचाउने गर्छन् ।”
जिल्ला संख्या : पर्सा : ४९४६७, कपिलवस्तु : ४०२४६, सर्लाही : ३६९३७, धनुषा : ३००१६, रूपन्देही : २७११५, बारा : २६०२८,
रौतहट : २१६९५, महोत्तरी : २०६३६, नवलपरासी : १९९०६, सिरहा : १९१०७ (वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भएका प्रमुख १० जिल्लाको २०७३ असार मसान्तसम्मको विवरण । स्रोत : गृहमन्त्रालय नागरिकता शाखा ।)
रमेश लम्साल / अच्युत रेग्मी २६ वैशाख, काठमाडौँ : सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ । तराई– मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नै बस्ती विस्तार गर्ने र व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्रश्रय दिने लक्ष्यका साथ नयाँ दश सहर बनाउन सरकारले तयारी गरेको हो […]
९ माघ २०७८, आईतवार १६:०९
कोहलपुरका शिक्षकलाई आईसीटी तालिम दिईंदै
१४ भाद्र २०७५, बिहीबार १८:२७
नेपालगन्ज उप–महानगरको वडानं. १८ ले दर्जन बढी सेवा निशुल्क गर्ने